Madaxweynaha Dalka Turkiga Rajab Tayib Ardogan Ayaa Ka Hadlay Afgambigii Milatari Ee Fashilmay | Berberatoday.com
Madaxweynaha Dalka Turkiga Rajab Tayib Ardogan Ayaa Ka Hadlay Afgambigii Milatari Ee Fashilmay
Istanbul(Berberatoday.com)-Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa kasoo muuqday telefishin gaar loo leeyahay isaga oo ay ku hareereysan yihiin taageerayaal badan kuna sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul.
Mr Erdogan ayaa sheegay in kuwa ka dambeeyay afgembiga u muuqda inuu dhicisoobay, ay muteysan doonaan ciqaab adag.
Waxa uu intaa ku daray in hadda loo baahan yahay “nadiifinta ciidanka qalabka sida ee dalkaasi”.
Waxaa hadda hawada dib ugu soo laabtay telefishinka ay dowladda leedahay ee TRT, kaasoo ay ciidanka gadoodsan ka jeediyeen fariintooda. Weriyaha warka baahisay ayaa sheegtay in qori lagu hayay marka ay akhrineysay.
Kumannaan qof oo diidan isku-dayga afgembi ayaa isugu soo baxay wadooyinka Istanbul iyo Ankara.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Maraykanka, John Kerry, ayaa telefoonka kula hadlay dhigiisa Turkiga, waxaana uu u sheegay in Maraykanka uu taageersan yahay dowladda dimuqraadiga ah ee Turkiga.
Waxaa taageera noocaasi ah Turkiga u muujiyay dalalka Jarmalka, Ruushka, iyo Qatar.